DOORO QOFKAAGA! - Somaliland Post
Home Maqaallo DOORO QOFKAAGA!
Nolosha adduunka ee qadhaadhka iyo macaanka iskugu lifaaqani waxa ay ku qurux badantahay dabbaalashadeedu adiga iyo wehel kuu qalma oo aad is heshaan.
Ha noqdo wehelkaasi mid xagga uu doono ka soo jeeda sida xaas/say, saaxiib, walaal ama wax kale oo u dhigma. Si aad u dhadhansato dheef wax ku ool ah marka ay kuu ahaato, waa in aad heshaa ciddii ku dareensiin lahayd ee kula damaashaadi lahayd, kulana qaybsan lahayd farxadda iyo wanaagga aad dareemayso ee noloshaada ku soo kordhay. Haddii aanay ciddaasi jirin oo ay farxaddu kugu kaliyaysato dhadhan iyo dheef kuu yeelan mayso, dareen iyo dabuubux midna kugu reebi mayso. Dhinaca kale, noloshu kama
soo hadho in aad hesho wehel kula qaybsada diihaalka adduunka. Sida aad u wanaagsantahay ayuun bay dhib adduun hab kugu soo odhanaysaa, illayn waa adduun oo waa hadhkaa labadiisa galin’e. Marka ay taasi timaaddo waxa aad u baahantahay mid ku garab is taaga hiil iyo hooba, ku dejiya oo dhibta kula qaysada, kuu hagarbaxa oo kuu hura naftiisa. Haddabo in aad hesho qofkaaga, mid kula mid ah oo marxalad walba heerka aad marayso kula taagnaada, adna aad u taagnaato ma sahlana heliddiisu. Waxa ay ubaahantahay baadhitaan badan iyo aqoon dheer. Si ay haddabo kuugu fududaato helitaanka qofkaagu waxa aad marka horeba is wayddiisaa qofka aad rabtaa tilmaamo noocee ah ayuu leeyahay oo aad dadka kaga soocanaysaa ama kaga dhex xulanaysaa? Si taasi kuugu fududaato waxa aad raacdaa oo ku xulataa qofkaaga tilmaamahan oo ah kuwa ugu wanaagsan ee qof lagu xusho.